ALA/ALC 1500mg Complex - Megafit Nutrition
ALA/ALC 1500mg Complex
Home Shop ALA/ALC 1500mg Complex
အမျိုးအမည်နံပါတ : 000-01.
အမျိုးအစားများ: ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ/ အမိုင်နိုအက်စစ်များ၊, အားသာချက်။.
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူး : ကိုယ်ခံအားစနစ်ပံ့ပိုးမှု စွမ်းအင်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ
အစွမ်းထက်ပြီး လည်ပတ်သွားလာနေသော မော်လီကျုများကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်သည့် ဓာတ်တိုးဆန့် ကျင်ပစ္စည်းသည် အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကြွက်သားများကို ပံ့ပိုးပေးသည်
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဂလူးကို့စ်ပမာဏကို ပံ့ပိုးပေးသည်
အရေအတွက် : 60 / 120
အမျိုးအစား : ဆေးတောင့်
တိုက်ကျွေးရမည့် ပမာဏ : ဆေး2တောင့်
ဆေးညွန်း : 1500 မီလီဂရမ်
ALA/ALC from MegaFit Nutrition formula isatop tier antioxidant and free radical scavenger. Acetyl L Carnitine could have strong benefits for the brain. ACL has been shown in clinical studies to benefit cognitive ability, energy, memory & Mood. ALA is found in every cell of the body and isapowerful antioxidant which helps turn glucose into energy. ALA also stimulates skin renewal.